Kireynta Muuqaalka LED-ka
Sida loo Sameeyo LED Video Wall XR Virtual Studio
Istuudiyaha dhijitaalka ah ee loo yaqaan 'digital digital studio' waa codsi soo baxaya oo soo jiitay dareen badan gudaha iyo dibedda sannadihii la soo dhaafay. Waxay isku dhafan tahay shaashadda ugu dambeysa ee teknolojiyada LED-ka ee leh nidaamka kaamirada kumbuyuutarka, nidaamka wax-u-qabashada waqtiga dhabta ah, iwm, oo keena professio la yaab leh ...
Xagee ka heli kartaa P2 Display Led Indoor In aan Ka Badnayn 1000USD
Hot Electronics P2 bandhig yar oo LED ah, dhibic dhibic 2mm, wuxuu ka samaysan yahay Die-cast aluminium aluminium ah, SMD 1515 laambad madow, wuxuu taageeraa dayactirka adeegga hore, qaangaar iyo xasilloon, oo loo adeegsado codsiyada darbiga muuqaalka sare ee qeexitaanka sare ee gudaha. High Cabbirka guddiga: 640mm * 480mm L ...
Kaliya Koobka Yurub Kiisaska Caadiga ah ee Isdhexgalka Dhacdooyinka Ciyaaraha iyo Shaashadda LED-ka
Saaxiibbada jecel kubbadda cagta, maalmahan ma dareemeysaa xamaasad weyn? Taasi waa sax, maxaa yeelay Koobkii Yurub ayaa furmay! Sannad sugitaan ah kadib, markii Koobkii Yurub la go’aamiyay inuu soo laabto, xamaasad ayaa bedeshay welwelka iyo niyadjabka hore. Marka loo eego go'aaminta ...
3 Qodobbada Muhiimka ah ee Iibsashada Muuqaalka Pixel Pitch Small
1. Tixgelin dhameystiran oo ku saabsan kala dheereynta barta, cabbirka iyo xallinta Pixel pitch, cabbirka guddiga iyo xallinta waa dhowr arrimood oo muhiim ah marka dadku iibsadaan bandhigyada LED-ga ee yar-yar. Xaaladda dhabta ah, maahan in midka yar ee pixel-ka iyo kan ka sarreeya ee loo yaqaan 'resoluti' ...
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada teknoolojiyada baakadaha kala duwan ee loogu talagalay alaabada hareeraha yar yar ee LED-ka iyo mustaqbalka!
Qeybaha LED-yada yar-yar ayaa kordhay, waxayna bilaabeen inay la tartamaan DLP iyo LCD suuqa bandhigga gudaha. Marka loo eego xogta ku saabsan miisaanka suuqa caalamiga ah ee muuqaalka LED, laga bilaabo 2018 ilaa 2022, faa'iidooyinka waxqabadka ee muuqaalka iftiinka yar ee LED-ka ...
Xilligii jawiga wanaagsan, aaladaha xirmooyinka IMD waxay dardar gelinayaan ganacsiga suuqa P0.X
Horumarka degdegga ah ee muuqaalka suuqa-yar ee muuqaalka-yar ee muuqaalka suuqyada soo-bandhigga ah ee 'Mini LED' inta badan wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: Dhererka dhibcaha ayaa sii yaraanaya oo sii yaraanaya; Cufnaanta pixel-ka ayaa sii kordheysa marba marka ka dambeysa; Muuqaalka daawashadu waa uu soo dhowaanayaa wuuna xirmayaa ...
EETimes-Saamaynta Dhibaatada IC oo Sii Dheereysa Baabuurta
In kasta oo in badan oo ka mid ah dareenka ku saabsan yaraanta semiconductor ay diiradda saareyso qaybta baabuurta, qeybaha kale ee warshadaha iyo dhijitaalka ah waxaa si isku mid ah ugu dhufaneysa carqaladeynta silsiladda IC. Sida laga soo xigtay baadhitaan lagu sameeyay soo saarayaasha ay wakiisheen shirkadda wax iibisa ee Qt G ...
Maajo Juun Julaay Nationstar LEDs P2.5 P2.91 P4.81 Stock
Hot Electronka Nationstar LEDs P2.5 P2.97 P4.81 Stock LED Screens Sharaxaada: P2.5 Gudaha Gudaha Video Video -Dhaxgal Muuqaal LED - Gudaha LED Screen Nationstar LEDs SMD2121 Tirada: 50sqm Cabirka Golaha Wasiirada: 640mmx480mm; Xallinta Golaha Wasiirrada: 256x192 pixels; Qaabeynta Gudiga ...
Shahaadada cusub ee CE ee ka socota Shenzhen Hot Electronics Co., LTD
Calaamadda Conformitè Europëenne (CE) waxaa lagu qeexay inay tahay calaamadda waafaqsanaanta khasabka ah ee Midowga Yurub (EU) ee nidaaminta alaabada lagu dhex iibinayo Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA) laga soo bilaabo 1985. Calaamadda CE waxay u taagan tahay caddeynta soo saaraha ee alaabtu u hoggaansamayso w ...
Kiiska Mashruuca Shaashadda Khadka Tooska ah ee elektaroniga ah Kahor 2021
Hot Electronics Co., ltd oo la aasaasay 2003, oo leh taariikh ka badan 18 sano oo tayo sare leh naqshadaynta iyo soosaarida Muuqaalka LED-ka. Waxaan si guul leh ula shaqeyneynay 200 oo waddan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan 20 + mashaariic Istaadiyam ah, 30 + Saldhigyo TV, Wax soo saarku wuxuu ...
Ogeysiiska Fasaxa ee 2021 QingMing Festival - Electronikada Kulul
Macaamiisha Qaaliga ah: Sida ku xusan ogeysiiska dowladda, Abriil 3 ~ 5, 2021 waa maalinta ciida ee 2021 Qing Ming Festival. Si aad u noqoto xiriir ganacsi oo ku habboon macaamiisheenna, nidaaminta faahfaahsan ee ciidaha waxay noqon doontaa sidan soo socota: Fasaxa Abriil 3 & 4 & a ...
Maxay dad aad iyo aad u tiro badani u isticmaalaan LED-ka si ay ugu beddelaan LCD ama DLP ama Projector?
1, Waxqabadka Fiican ee Fiidiyowga P2.5 P1.8 LED wuxuu leeyahay dhalaal sare, isbarbardhig sare, iyo midab sarreysa oo midabkeedu sarreeyo, taasoo ka dhigeysa muuqaalka LED-ka mid ka muuqaal iyo muuqaal badan LCD. Nooca Brightness Isbarbardhiga Saamiga Midab ee Midabaynta LED 200-7000nits 3000 -...